नायक न्यायाधीश- टेकनारायण कुँवर :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
बालकृष्ण बस्नेत |
अदालत र न्यायाधीशका खराब कामबारे समाचारले हरेक दिनजसो अखबारका पाना भरिरहेका बेला अपवाद बने, टेकनारायण कुँवर । सर्वोच्च तहकै कतिपय न्यायाधीश आफ्नै कामकारबाहीका कारण चर्को विवादमा तानिएकै साता ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश कँुवर भने न्यायसम्पादनमा अब्बल ठहरी अमेरिकी सरकारबाट सम्मानित भएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाममा न्यायालयमा बसेर उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै '२०१४ हिरो एक्टिङ टु इन्ड मोर्डन सेलभरी अवार्ड' प्रदान गरेका थिए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) ले विश्वभर उत्कृष्ट काम गर्ने विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई वर्षेनि उक्त सम्मान दिंदै आएको छ । न्यायालयबाट भने विरलै पाउने उक्त सम्मान हात पार्ने ४९ वर्षे कुँवर पहिलो नेपाली न्यायाधीश हुन् । अमेरिकी सरकारले दिने सम्मान आफ्नै सहकर्मीले पाएको खबरले नेपालका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल तहमा झनै खुसी र उत्साह थपेको छ । सामान्यतः बाहिरी दुनियाँबाट टाढै रहेको मानिने अदालती सेवामा रहेर पनि विश्व चिनाउने काम गर्न सकिने रहेछ भनी प्रमाणित भएको छ, यसपटक । सम्मान थापेर केही दिन अमेरिकामै रहेका न्यायाधीश कुँवर अदालतको चुस्त व्यवस्थापन र कानुनको सही व्याख्याका कारण आफूले यस्तो सम्मान पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सम्मान लिंदै गर्दा विदेशमन्त्री केरीले आफूलाई धाप मार्दै भनेको कुराले भने उनलाई निकै छोएछ । 'जजेज इन द युएस सुड बी लाइक यु', अर्थात् अमेरिकाका न्यायाधीश पनि तपाईंजस्तै हुनुपर्छ भनी केरीले खुसीसाथ अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधान र कानुनको व्याख्यामा विश्वभर कहलिएको अमेरिकी अदालतका नजिरको प्रसङ्ग हाम्रै सर्वोच्चका इजलासमा पनि बहसका सन्दर्भमा बेलाबखत उठ्ने गर्छन् । नेपालमा खासगरी मानव बेचबिखन विरुद्ध अपराधमा पीडितको पक्षबाट कुँवरले गरेको व्याख्यालाई इंगित गर्दै केरीले उनीप्रति उत्साहप्रद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
'राम्रो काम गरिरहे कुनै न कुनै रूपमा मूल्यांकन भइहाल्दो रहेछ', केही दिनमै नेपाल फर्किन लागेका उनले टेलिफोन
संवादमा भने- 'यो सम्मान र केरीको अभिव्यक्तिले मलाईमात्र नभई देशलाई नै चिनाएको छ ।'
वर्षभरि विभिन्न क्षेत्रका 'हिरो' खोज्ने अमेरिकी आँखामा नेपालका यी युवा न्यायाधीश त्यसै परेका होइनन् । सबैभन्दा तल्लो तहको अदालतमा बसेर माथिल्ला तहकालाई नमुना देखाउने काम यिनले गर्दै आएका छन् । जिल्ला तहकै अदालतबाट पनि 'न्यायिक सक्रियता' देखाई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनले आफ्नो फैसलाबाट देखाइसकेका छन् । परम्परागत मुलुकी ऐनसहित विभिन्न कानुनको आधुनिक, प्रगतिशील र विवेकपूर्ण व्याख्या नहुने हो भने कतिपय सन्दर्भमा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था छ । 'नेपालका कानुन, दैवले जानुन्', 'न्यायका नौ सिङ'जस्ता कहावत त्यसै जुरेका होइनन् । कानुनका केही यस्तै 'लुपहोल' समातेर जित्नपर्ने मुद्दा हार्ने, हार्नपर्ने मुद्दा जित्ने गरिएको अदालतमा निकै भेट्टिन्छन् । कमी-कमजोरीमा खेलेर सरकारी वकिल भ्रमपूर्ण अभियोग पेस गर्छन् । कानुन व्यवसायी जबर्जस्ती तर्क र बहस सुनाउँछन् । त्यसैमा टेकेर कतिपय न्यायाधीश 'अन्यायपूर्ण' फैसला सुनाउँछन् ।
संविधानका धारा र कानुनका दफा समातेर मात्रै पनि सही न्याय हुन नसक्ने बताउँछन् कुँवर । त्यसको उचित र विवेकसम्मत व्याख्या, प्रमाणको सही मूल्यांकन भएन भने पक्षमाथि अन्याय पर्न सक्छ ।
'हाम्रो सन्दर्भमा त कानुनमा लेखिएकै छैन भने पनि त्यसको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ', कुँवर भन्छन्- 'ऐनले केही बोलेको छैन भनेर न्यायाधीश नबोलिरहन सक्दैन । कतिपय कुरा ऐनले लेखेर मात्र पनि हुँदैन । त्यसमा न्यायाधीशले विवेकशील र फराकिलो व्याख्या गर्नुपर्छ ।'
सामाजिक विकास र मानवअधिकारका काममा लागेका, प्रायः गैरसरकारी संस्थाका अगुवाले पाउने सम्मान यो पटक कुंँवरले पाएका हुन् । यसअघि चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धै सक्रिय नेपाली महिला चरिमाया तामाङले यस्तो सम्मान पाएकी थिइन् ।
कुँवर जिल्ला अदालतको अधिकृत, सर्वोच्च अदालतमा उपरजिष्ट्रारको अनुभव सँगाल्दै ७ वर्षअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । दुर्गम मुगुबाट सुरु गरी उनी बर्दिया, काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै हाल ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश छन् ।
उनलाई अमेरिकी सम्मान भने मकवानपुर जिल्ला न्यायाधीश हुँदा चेलीबेटी बेचबिखन, घरेलु हिंसा लगायत मुद्दा सुनवाइमा उनले सुरु गरेको 'फास्ट ट्रयाक' पद्धति र पीडितका पक्षमा भएको फैसलाले नै दिलायो । चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी दर्जनौं मुद्दामा उनको इजलासले निरन्तर सुनवाइ गरी हदैसम्मको कैद सजाय तोकेको थियो । मुलुकी ऐनले जन्मकैद २० वर्ष तोके पनि मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐनले विभिन्न अभियोगका आधारमा त्यो सजाय बढाउन सकिने भन्दै उनले एकै अभियुक्तलाई ४४ वर्ष सम्मको कैदसमेत तोकेका थिए ।
यी दुईमात्र नभई अन्य मुद्दा पनि उनले 'फाष्ट ट्रयाक'बाटै हेर्न सुरु गरेका थिए । 'औसतमा ३ महिनाभित्र जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दा फैसला भइसक्थे', कुँवर भन्छन् ।
न्यायसम्पादनमा उनको अर्को फरक सुरुवात भनेको पीडित केन्द्रित फैसला हो । चेलीबेटी बेचबिखनकै मुद्दामा उनको इजलासले पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने फरक धारको फैसला गरेको थियो । अहिलेसम्म पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएकाले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन उनले फरक धार देखाएका हुन् ।
'यस्ता मुद्दामा पहिलो कुरा खास पीडक पक्राउ नै परेका हुन्नन् । उनीहरूको ठूलो माफिया हुन्छ । उनका सहयोगी दलालमात्र समातिने हुन्', अनुभव राख्दै कुँवर भन्छन्- 'ती सहयोगीका रूपमा काम गर्नेबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन गाह्रो छ ।'
पीडकबाट राज्यले पनि निश्चित पैसा भराई कोष बनाउने गरेको तर त्यसलाई पीडितका लागि दिन कञ्जुस्याइँ गरेको उनी सुनाउँछन् ।
मकवानपुरमा एक वर्ष हुँदा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै नेपालमै पनि २०६९ सालमा उनी उत्कृष्ट जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा न्यायपरिषदबाट पुरस्कृत भएका थिए । त्यतिबेला उनले एक वर्षमा ९९५ मुद्दा दायर भएकोमा ७९८ अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गरेका थिए । कतिपय मुद्दा त दायर भएकै दिन सुनवाइ थाली भोलिपल्ट प्रमाण बुझ्ने र तेस्रो दिन फैसलासमेत गरेका थिए ।
भएकै सीमित जनशक्ति र स्रोतबाट नै व्यवस्थित काम गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना उनी जुन अदालत गयो, त्यहीं देखाएका
छन् । सर्वोच्चले केही महिनाअघि घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन सहितका छिटो सुनवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा कारबाही किनारा गर्न 'फाष्ट ट्रयाक' अदालत गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
'भएकै अदालतलाई पनि फाष्ट ट्रयाकमा लान सकिन्छ । त्यसका लागि टिम वर्क र इच्छाशक्ति चाहिन्छ', उनी भन्छन् ।
ललितपुर अदालतमै उनले जेन्डर डेस्क, हेल्प डेस्क तयार गरेका छन् । जहाँ घरेलु हिंसा, मानाचामल जस्ता मुद्दा अघि बढाउन उचित सहयोग पुुगेको छ । त्यस्ता मुद्दा निरन्तर सुनवाइ पनि हँुदै आएको छ ।
पर्वत फलेवासमा सामान्य परिवारमा जन्मे-हुर्केका कुँवर आफ्नो सानीमाले अदालतमा झेलेको समस्या देखी कानुन पढेर छिटो, छरितो न्यायका लागि लड्ने विचार पलाएको सुनाउँछन् । एसएलसीपछि स्कुलकै आफ्ना अंग्रेजी गुरु हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेको पहलमा उनी पोखरा आई कानुन विषयमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन सुरु गरे । प्रमाणपत्र तहमै प्रथम श्रेणीमा प्रथम भई आफ्नो उत्कृष्टताको सुरुवात गरेका थिए ।
मानवअधिकार र लैङ्गकि समानताप्रति बढी केन्दि्रत भएकाले न्यायाधीश कुँवर यस्ता मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । मानवअधिकार मुख्य विषय बनाई काठमाडौं स्कुल अफ ल र हङकङ विश्वविद्यालयबाट 'डबल डिग्री' हासिल गरेका उनी आँटी न्यायाधीशका रूपमा समेत चिनिन्छन् । 'न्यायाधीशमा कार्यक्षमता हुनुपर्छ । त्यसपछि इमानदारिता । यी दुई कुरा भए कोहीसँग पनि झुक्नु पर्दैन', निडर भएन भने निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा समेत बाधा पुग्ने औंल्याउँदै कुँवरले भने ।
धेरै न्यायाधीश अदालतका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउँछन् । अदालतका कुरा बाहिर नआइदिओस् भन्ने चाह राख्नेहरू पनि छन् । तिनकै पहलमा तयार भएको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकको त अहिले सर्वत्र विरोधसमेत भएको छ । न्यायाधीश कुँवरको बाटो फरक छ । 'नबिराउनु, नडराउनु र नझुक्नु' भन्दै उनी ढुक्कैले न्यायपालिका र यसको मर्यादाबारे लेख्ने, बोल्ने गर्छन् ।
'माघ १९' पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले शाही शासनको खुलेर समर्थन गर्दा सर्वोच्चमा उपरजिष्ट्रार रहेका कुँवर भने त्यसको विरोध गर्दै लेख छाप्थे । 'अदालतको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सरकारबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । न्यायपालिका स्वयम्ले पनि आफ्नो अधिकार, गरिमा र मर्यादा घटाउने काम गर्नुहुन्न', त्यतिबेला उनले लेखेका थिए । 'मेरो लागि होइन । संस्थाको लागि हो । म किन चुप लाग्ने ?' त्यतिबेला कुँवरले यस पंक्तिकारसँग भनेका थिए ।
असल न्यायाधीश हुन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? भनी त्यतिबेलै जिज्ञासा राख्दा उनले ३ कुरामा जोड दिएका थिए । पहिलो, न्यायप्रति प्रतिबद्धता, दोस्रो, निष्ठा र तेस्रो, लगनशीलता । सायद यही कारण उनी विश्वमाझ चिनिने 'हिरो' भए ।
प्रकाशित मिति : २०७१ असार १४ (June 28, 2014)